प्रकाश २२ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२२ अनि तिनले मलाई जीवन दिने पानीको नदी देखाए, जुन मणिभजत्तिकै कञ्चन थियो अनि परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट निस्केर २ त्यस सहरको मूल बाटोको बीचबाट बगिरहेको थियो। अनि त्यस नदीको दुवै किनारामा जीवनका रूखहरू थिए, जसले हरेक महिना फल फलाउँथे अर्थात्‌ वर्षमा बाह्र बाली दिन्थे। अनि ती रूखका पातहरूचाहिं राष्ट्र-राष्ट्रका मानिसहरूलाई निको पार्नका लागि थिए। ३ तब त्यहाँ कुनै किसिमको सराप हुनेछैन। बरु, परमेश्वर अनि थुमाको सिंहासन त्यस सहरमा हुनेछ र परमेश्वरका दासहरूले उहाँलाई पवित्र सेवा चढाउनेछन्‌। ४ तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन्‌ र उहाँको नाम तिनीहरूको निधारमा हुनेछ। ५ साथै, त्यहाँ रात पनि हुनेछैन अनि तिनीहरूलाई न बत्तीको न त घामको उज्यालोको आवश्यकता नै पर्नेछ, किनकि यहोवा परमेश्वरले तिनीहरूमाथि ज्योति चम्काउनुहुनेछ अनि तिनीहरूले सदासर्वदा राजाको रूपमा शासन गर्नेछन्‌। ६ त्यसपछि, स्वर्गदूतले मलाई भने: “यी वचनहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्‌। हो, भविष्यवक्ताहरूलाई बोल्न प्रेरित गर्नुहुने यहोवा परमेश्वरले अब छिट्टै हुन लागेका कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई प्रकट गर्न आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनुभयो। ७ हेर, म छिट्टै आउँदैछु! आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले यस पुस्तकमा भएका भविष्यवाणीका वचनहरू पालन गर्छन्‌।” ८ म यूहन्नाले यी कुराहरू सुनिरहेको अनि देखिरहेको थिएँ। अनि जब मैले ती सुनें अनि देखें, तब यी कुराहरू मलाई देखाउने स्वर्गदूतको उपासना गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परें। ९ तर तिनले मलाई भने: “होसियार! त्यसो नगर! किनकि म तिम्रो अनि तिम्रा भाइहरू, जो भविष्यवक्ताहरू हुन्‌, तिनीहरूको अनि यस पुस्तकका वचनहरू पालन गर्नेहरूजतिको सँगी दास मात्र हुँ, बरु परमेश्वरको उपासना गर।” १० तिनले मलाई यसो पनि भने: “यस पुस्तकमा भएका भविष्यवाणीका वचनहरूमा लाहाछाप नलगाऊ, किनकि तोकिएको समय नजिकै छ। ११ जसले परमेश्वरको स्तरविपरीत गलत काम गरिरहेको छ, उसले त्यसै गरिरहोस् अनि जसको चालचलन फोहोरी छ, ऊ त्यस्तै रहिरहोस् तर जसले परमेश्वरको स्तरबमोजिम सही काम गरिरहेको छ, उसले त्यसै गरिरहोस् अनि जो पवित्र छ, ऊ पवित्र रहिरहोस्। १२ “ ‘हेर, म छिट्टै आउँदैछु! अनि हरेकलाई उसको कामअनुसार म जे इनाम दिन्छु, त्यो मसित छ। १३ अल्फा र ओमेगा,* पहिलो र अन्तिम अनि सुरुवात र अन्त म नै हुँ। १४ आनन्दित हुन्‌ ती मानिसहरू, जसले आफ्नो लुगा धोएका छन्‌, किनकि तिनीहरूले जीवनका रूखहरूको फल खाने अधिकार पाउनेछन्‌ अनि त्यस सहरका ढोकाहरूबाट पसेर तिनीहरू सहरभित्र जान पाउनेछन्‌। १५ तर कुकुरहरू, तन्त्रमन्त्र गर्नेहरू, अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेहरू, हत्या गर्नेहरू, मूर्तिपूजा गर्नेहरू, झूट मन पराउनेहरू अनि झूट बोल्नेहरूजति भने सहरबाहिर हुनेछन्‌।’ १६ “‘मण्डलीहरूको भलाइको निम्ति तिमीहरूलाई यी कुराको साक्षी दिन म, येशूले आफ्नो स्वर्गदूत पठाएको हुँ। म दाऊदको जरा अनि सन्तान र बिहानको चहकिलो तारा हुँ।’ ” १७ त्यसपछि, पवित्र शक्ति अनि दुलहीले यसो भनिरहे: “आऊ!” त्यसैगरि, जसले सुन्छ, उसले भनोस्: “आऊ!” जो तिर्खाउँछ, ऊ आओस्; अनि जसले चाहन्छ, उसले जीवन दिने पानी सित्तैंमा लेओस्। १८ “यस पुस्तकमा भएका भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्नेजति सबैलाई म यो कुराको साक्षी दिन्छु: यदि कसैले यी कुराहरूमा केही थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले ऊमाथि थप्नुहुनेछ। १९ अनि यदि कसैले भविष्यवाणीको यस पुस्तकबाट केही वचन हटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएको जीवनका रूखहरू र पवित्र सहरबाट उसले पाउने भाग परमेश्वरले खोस्नुहुनेछ। २० “जसले यी कुराहरूको साक्षी दिनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ: ‘हो, म छिट्टै आउँदैछु।’ ” “आमिन! हे प्रभु येशू, आउनुहोस्।” २१ प्रभु येशू ख्रीष्टको असीम अनुग्रह पवित्र जनहरूसित रहोस्।
^ प्रका २२:१३ * अल्फा र ओमेगा ग्रीक वर्णमालाका पहिलो र अन्तिम अक्षर हुन्‌।